सकियो बालुवाटार बैठक, के-के भयो सहमति ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सकियो बालुवाटार बैठक, के-के भयो सहमति ?
काठमाडौं । बालुवाटारमा बसेको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीचको बैठक निस्कर्षमा नपुगि सकिएको छ । बैठकमा दुईवटा विषय सहमति नजिक पुगेपनि र दुईवटा विषय जटिल भएकाले निस्कर्ष आउन सकेन । संविधान संसोधन, महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने, बजेट ल्याउने र दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने चारवटा एजेण्डामा छलफल भएकोमा दलहरु सबै विषयमा मध्यमार्गीधारबाट सहमति खोज्न तयार भएका छन् । एमालेले चुनाव सार्नुपर्ने र चुनावपछि मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने अडान लिएको छ भने संघिय गठबन्धनले संसोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले छलफल सकारात्मक भएको तर कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताए । उनले भाषामा परिमार्जन गरेर एमाले संविधान संसोधनमा सघाउन तयार रहेको तर बजेट चुनावपछि लैजानुपर्ने र दोस्रो चरणको चुनाव अगाडी सार्नेपर्ने अडान रहेको बताए । मतगणना र दोस्रो चरणको चुनाव निकै टाढा रहकाले आचार संहिता विपरित रहेको एमालेले अडान राखेको छ । निर्वाचन, बजेट, संविधान संशोधन तथा महाअभियोगको विषय मध्यमार्गी बाटोबाट प्याकेजमा नै हल गर्नेमा भने बैठक सहमत भएको नेताहरुले जनाएका छन् ।
संघिय गठबन्धन नेता केशव झाले जेठ ४ गते नै संविधान संसोधन प्रक्रिया अगाडी बढाएर पारित गर्नुपर्ने गठबन्धको प्रस्ताव रहेको बताए । गठबन्धनमा रहेका नेताहरुलाई पनि चुनावमा भागलिन मिल्नेगरि प्रक्रिया अगाडी बढाउन र नभए प्रष्ट धारणा ल्याउन माग गरिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमतिका साथ सबै विषय टुङ्गो लगाउन सरकारले लचक भएको बताएका थिए । सरकारले १५ जेठमा कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउने तथा ३१ जेठमा नै दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । काम चलाउन भनेको कस्तो ? भन्दै एमालेका नेताहरुले प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा ओलीले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको र सत्तारूढ दल त्यसमा सकारात्मक बनेको छ । निर्वाचन, बजेट, महाअभियोगका विषयमा दलहरूबीच समझदारी भए पनि संविधान संशोधनको विषयमा भने समझदारी जुट्नसकेको छैन । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन संविधान संशोधन गरेर मधेसी दललाई पनि चुनावमा ल्याउन संशोधनमा सहयोग गर्न सत्तारूढ दलले आग्रह गरे पनि एमालेले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन ।